Gudoomiyaha Barlamanka oo Nairobi kula kulmaya Hey’adaha Samafalka. | raascasayrmedia.com
← Madaxwaynaha Puntland oo Sheegay in Dowlada Itoobiya Lagula Xisaabtami Doono Rabashidihii Buuhoodle ,kana Warbixiyay Safaradii uu ku Maqnaa ee Dalka Dibadiisa
3 wasiiro oo iska casilay dawlada sheikh shariif →
Gudoomiyaha Barlamanka oo Nairobi kula kulmaya Hey’adaha Samafalka.
Gudoomiyaha Barlamanka Soomaaliya oo ku sugan Dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maanta uu kulamo la yeesho qaar ka mid ah Hey’adaha Q.midoobay.
Mudane Shariif Xasan Sh.Aadan gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ka anba baxay magaalada Muqdisho isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo xildhibaano ah islamarkaana gaaray magaalda Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta la filayaa in ay kulamo la qaataan madaxda hay’adaha deeqaha bixiya ee Q.midoobay, kuwaa uu gudoomiyuhu kala hadli doono arimo ay ka midyihiin mushaaraadka mudanaayaasha Baarlamaanka qaabkii loo bixin lahaa iyo xaaladaha bani’aadanimada ee ka taagan wadanka Soomaaliya .
Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya mudane Maxamed Cali Ameriko oo warbaahinta u waramayay ayaa ka warbixiyay kulamada maanta gudoomiyiha u qorshaysan .
Sidoo kale gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaliya mudane shariif Xasan ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Nairobi waxaa uu shirar la qaadan doonaa mas’uuliyiin iyo madax kale oo ka mid ah mas’uuliyiinta dowladda Kenya .
Safarkaan gudoomiyaha Barlamaanka uu ku tegay wadanka Kenya ayaa ah kii ugu horeeyay ee uu dabada ugu baxo, tan iyo markii dhowaan xilkaasi loo doortay , waxaana uu ku soo aadayaa xilli Baarlamaanka Soomaaliya uu ku guuleeystay dhameeystirka kuxigeenada gudoomiya Baarlamanka.